Health Archives - SKY Media
Covid-19 ဘယ်လိုပျောက်ကွယ်သွားမှာလဲ 👇👇👇
September 3, 2020 nyi	0 Comments
ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်ကန့်သတ်လိုက်နိုင်တဲ့အခါမှာ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ (Pandemic) ပျောက်ကွယ်သွားလေ့ရှိပါတယ်။SARS ဘယ်လိုပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သလဲ SARS တုန်းက ကူးစက်မှုကွင်းဆက်ပြတ်သွားခြင်းပါ။ေ ရာဂါရှိတဲ့လူတွေကို အဲ့ဒီတုန်းက အသေအချာ မပြန့်ပွားအောင်နောက်ဆုံးမှာ ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါတောင် ၂၀၀၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကနေပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ် မေလအထိကြာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံး
“COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် (၃) ဦးတွေ့ရှိပါသည်”COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၂၃-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၈:၀၀)နာရီ
August 23, 2020 August 23, 2020 nyi	0 Comments
(၂၂-၈-၂၀၂၀) ရကျနအေ့တှကျ COVID-19 ရောဂါ ဓာတျခှဲစဈဆေးရာတှငျ -အမြိုးသားကနျြးမာရေးဓာတျခှဲမှုဆိုငျရာဌာန(ရနျကုနျ) (NHL) မှ ဒုတိယအသုတျအနဖွေငျ့ ဓာတျခှဲနမူနာ (၂၅၂) ခုနှငျ့ ရနျကုနျမွို့၊ တပျမတျောဆေးရုံကွီး ခုတငျ (၁၀၀၀) မှ ဓာတျခှဲနမူနာ (၁၄၇) ခုတို့
စစ်တွေကပိုးတွေ့လူနာ(၃၇၈)နဲ့ဆက်စပ်မှုရှိခဲ့တာကြောင့် Quarantine ဝင်နေရတဲ့ ရွှေလမင်းအထူးကုဆေးရုံက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း(၁၃) ယောက်ကိုပထမအကြိမ်ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာမှာ ပိုးမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ လမ်းမတော်မြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ထွန်းက One News ကိုဩဂုတ်လ(၂၂)ရက်နေ့မှာပြောပါတယ် ။ “ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးမှူးပြောပြချက်အရ ပိုးမတွေ့ဘူးပြောတယ်။ ရောဂါ ပိုးရှိ၊ မရှိ
January 2, 2020 phyo	0 Comments
Cucumber is full of fiber and water proof involving prevent constipation and urinary stones. Thus, the majority of Americans to
December 2, 2019 January 2, 2020 alpha	0 Comments
During the year 2018, British citizens to fill drinking soft drinks, there areatotal of 679 million liters. Some